कान्ति र ट्रमा सेन्टरले गर्ने विपन्नको निशुल्क उपचारको मापदण्ड कस्तो छ ? – Sulsule
कान्ति र ट्रमा सेन्टरले गर्ने विपन्नको निशुल्क उपचारको मापदण्ड कस्तो छ ?
सुलसुले २०७७ असोज ६ गते १४:३८ मा प्रकाशित
कान्ति बाल अस्पताल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले गरिब तथा विपन्नको प्रारम्भिक आकस्मिक उपचार सेवा निशुल्क गर्ने भनेको छ । तर विपन्न र सम्पन्न छुट्याउने मापदण्ड के बनाएको छ त अस्पतालले ?
अस्पतालले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम गरिब, विपन्न तथा साथमा कोही नभएका बिरामीका लागि प्रारम्भिक आकस्मिक सेवा निशुल्क गरिएको जनाएको छ ।
तर विगतमा सरकारी कार्यालय अस्पतालहरुमा पनि विपन्न जनताको नाममा सम्पन्नले सेवा सुविधा लिएका थुप्रै उदाहरणहरु हामीसँग साक्षी छन् । पैसा खर्च नगरी पाएको सेवा सुविधा लिन त जो पनि मरिहत्ते गर्छन् ।
तर वास्तविक गरिव वा विपन्न को हो भनेर छुट्याउने दरिलो मापदण्ड अस्पताल प्रशासनले गराएन भने गरिवहरुलाई हिस्स वुढी खिस्स दाँत भन्ने उखान जस्तै अस्पताल बन्न जानेछन् ।
कान्तिका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेल कुनै पनि बालबालिकाले पैसा नभएकै कारण आकस्मिक सेवा नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था नआओस भनेर यो सेवा सुरु गरेको बताइरहँदा अस्पतालकै आडमा धेरै गरिव परिवारका वालबच्चाको प्राण गयो तर अस्पताल प्रशासन केवल गरिव दुखीहरुसँग अस्पताल शुल्क उठाउनमै व्यस्त रह्यो।
ट्रमा सेण्टर,कान्तिबाल अस्पतालले अघि सारेका कार्य योजना राम्रा छन् तर कार्यान्वयनपक्षमा विगतमा जस्तो फितलो नदेखियोस्। कोरोना महामारीको अवस्थामा रोगको उपचार गर्न पैसा नभएकै कारण धेरै नेपाली गरिवले जयान गुमाइसकेको अवस्था छ भने कति त उपचार गर्न पैसा नभएर रोग लुकाएर घरमै बस्न परेको अवस्था छ । निजी अस्पताललाई कोरोना उपचार गर्ने वहानामा लुटेर खाने अनुमति दिएको छ ।
अस्ति भरखर एकजना आलमको कोरोना परिक्षण गर्न चार ठाउँमा लगभग तिन लाख खर्च गरेर डुलाउदै कतै नेगेटिभ त कतै पोजेटिभ रिर्पोट देखाएको राज्यले देखेकै छ । यो बेलामा राज्यले के हेरिरहेको छ ? यस्तो अस्थिामा गरिव विपन्नले कसरी उपचार गर्ने ?
राज्यले खोलेका अस्पतालमा सहज र सुलभ तरिकाबाट विपन्नहरुको उपचारको व्यावस्था सरकारले मिलाओस् र यसको कार्यान्वयनको अनुगमन पनि सम्बन्धित निकायले गरोस् आनि बल्ल जनताले राज्य आफ्नो भएको महसुस् गर्नेछन् ।